Qeybtaan waxaad ka heleysaa warbixin kusaabsan sida eey tahay in lagu noolaado Iswiidhan. Sida siyaabaha kala duwan ee loo dego guryaha, dhaqanka iyo howlaha firfircoonida. Bogga lagu soo bandhigo warbixinta ku saabsan gobolada iyo degmooyinka waxaad ka heleysaa fursadaha xaga guryaha, shaqada iyo jaaliyadaha iyo ururyada laga helo degmada. ​
​Maxaa laga helaa degmadeyda
​Intee baa aniga degikara?
Inta ka fiirso filimka ku saabsan ku noolanshada degmo yare!
Qaanuunadee ka jira meesha aan degenahay?
Sidaan ayaad u raadineysaa guri
Talo iyo warbixin ku saabsan siyaabaha kala duwan ee loo dego
Inkastoo dadka degan Iswiidhan eey badneyn hadana waxaa degmooyin badan ka jirta guryo la'aan. In guri laga helo magaalooyinka waaweyn weey adagtahay marka loo barbardhigo baadiyaha. Waa caadi in degmo la degenaado degma kalana laga shaqeeyo. Degmooyinka badankood waxeey leeyihiin isku xir wanaagsan oo xaga gaadiidka ah taasoo fududeeyneeyso in u safartid shaqada.
Iswiidhan waxaa deggan dad gaaraya 10 malyan oo qofood. Qeybta dadka ugu badan iswiidhan waxey deggan yihiin magaalooyinka. 3,5 malyan oo dad ah waxey deggan yihiin goboladda ku hareereysan Stockholm, Göteborg iyo Malmö.Ku dhowaad shan meelood meel dadka waxeey ku dhasheen wadanka dibadiisa ama waxaa dhalay waalidiin ku dhashay wadan kale. Luqadda rasmiga ah ee wadanka waa iswiidhishka; saamerka, fiinlaandeeska, roomaaniyaanka iyo luqadda yahuuda ee jiddisch waa luqadaha yaryar ee looga hadlo wadanka.
Beddelaadda adareeska markaa codsiga guurida suubineysid - SE
Warbixin kale oo ku saabsan is diwaangalinta dadka waxa ka heleysaa bogga internetka oo Hay’adda canshuurta - SE
Liis adareeska dhammaan degmooyinka Iswiidhan - SE
Liiska hubinta, nabadgelyada
Guddiga badbaadada dabka
Koorso: Ammaanka debka xagga guriga
Muxuu bankigu u weydiinayaa su’aalahaas badan?
Marka aad hesho lambarka shakhsiga ayaad macaamiil ahaan wax badan qaban kartaa. Tusaale ahaa, waxaad qaadan kartaa kontaraag telefoon, wax ayaad internedka kaga iibsan kartaa oo aad heshii saxeexi kartaa. Markaad macmiil tahay, ayaad leedahay xuquuq iyo masuuliyado iyadoo ay wanaagsan tahay inaad kuwaas ogaato.